Meydad hor-leh oo laga soo saaray dhismaha Hotelka Elite ee la weeraray – HalQaran.com
Meydad hor-leh oo laga soo saaray dhismaha Hotelka Elite ee la weeraray
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa maanta hotelka Elite oo ku yaalla Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho laga soo saaray meydad hor leh, kuwaasi oo ku dhintay weerar ku bilowday qarax ay ku qaadeen maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Subixii Isniinta maanta ayaa waxaa Hotelka tegay qaar kamid ah dadka ku nool Gobolka Banaadir oo baadi goobayay Ehelladooda oo ka maqan kuna tuhmayeen inay joogeen Hotelka, waxaana laga soo saaray meydka ilaa dhowr qof.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali ayaa waxaa uu sheegay in 16 Ruux ay weerarkasi ku dhinteen, hayeeshee ay korortay dhimashada, kadib markii meydad hor leh maanta laga soo saaray gudaha Hotelka.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa ku sugan Xeebta liido, kuwaas oo sugaya Amniga maadaama howlo nadaafadeed ay ka bilawdeen hotelka Elite iyo meelaha ku dhow dhow oo uu qaraxa saameeyay.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka argagixiso ee lagu qaaday Hotelka Elite oo ku yaalla Xeebta liido, iyaga oo sheegay inay ku dileen mas’uuliyiin iyo Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Tags: Hotel Elita, laga soo saaray, Meydad horleh, Xeebta Liido
Madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Hotel Elite ee Xeebta Liido